रूस मा, त्यहाँ विभिन्न मोबाइल नेटवर्क छन्। हरेक कम्पनी आफ्नो फाइदा र बेफाइदा, केही आकर्षक र उपयोगी, आकर्षक प्रस्ताव छ। रूसी संघ को जनसंख्या थप भरोसा राख्छन् जसले? संचालक विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिइएको छ? तपाईं वास्तविक ग्राहकहरु को प्रतिक्रिया ध्यान भने यो सबै छैन पनि गाह्रो छ बुझ्छु। संचालक सधैं आफ्नो उत्पादनहरु touted। तर वास्तविक तस्वीर अक्सर छैन नै प्रतिज्ञा छ। त्यसैले रूस मा के ध्यान गर्न पहिलो स्थानमा सिफारिस गरिएको छ? जो सबैभन्दा लागत-प्रभावकारी र उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दछ?
के प्रयोगको लागि?
पहिलो कुरा तपाईं यसलाई मोबाइल उपकरण र यसको सञ्जाल प्रयोग गर्न योजना छ कुन उद्देश्यका लागि निर्णय गर्नुपर्छ। प्रत्येक अपरेटर एक विशेष क्षेत्र मा राम्रो छ। यो कारक छलफल हुनेछ। आखिर, कुनै सिद्ध कम्पनीहरु छ।
सामान्य मा, एक मोबाइल संचार नेटवर्क निम्न आवश्यकता लागि प्रयोग गरिन्छ:
इन्टरनेट (इन्टरनेट सर्फिङ) मा काम;
डाउनलोड / दृश्य फोटो;
इन्टरनेटमा डाटा र सन्देशहरू विनिमय;
गर्नुपर्छ मोबाइल अपरेटरहरु सक्रिय टेलिभिजन सेवाहरू, साथै इन्टरनेटको घर प्रचार गर्दै भन्ने तथ्यलाई ध्यान। यस कारण, यो एउटा सेवा कम्पनी निर्धारण गर्न गाह्रो भयो।
र जसलाई बीच चयन गर्न सकिन्छ? मोबाइल रूस मा नेटवर्क भन्दा साधारण हो? विभिन्न शहर मा, विभिन्न कम्पनीहरु सञ्चालन। तर रूस मा त्यहाँ मोबाइल नेटवर्क संचालक को एक साधारण सूची हो। तिनीहरूले लगभग हरेक शहर उपलब्ध छन्।
आज, निम्न सूचीबाट मोबाइल संचार सेवा प्रदान गर्न एक कम्पनी छनौट:
यी बयान सामान्य रूस सबै को सबै भन्दा छ। त्यसैले तिनीहरू विशेष ध्यान गर्नुपर्छ। प्रत्येक दृढ को फाइदा र बेफाइदा के छ हो? तिनीहरूले आफ्नो ग्राहकहरु के प्रस्ताव?
मोबाइल अपरेटरहरु सामान्यतया धेरै मापदण्डहरु मापन गरेअनुसार। तिनीहरूले सदस्य निर्णयलाई मा एक गम्भीर प्रभाव गर्न सक्षम छन्। एक नागरिक उपयोग निर्णय भएपछि एक मोबाइल नेटवर्क सबै अवस्थित यो सेवा भेटी कम्पनीहरु मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
तर के अंक पहिलो स्थानमा उल्लेख गर्नुपर्छ? संभावित सदस्यहरू निर्णय छुट्टयाएर छ प्रभावित गर्ने मुख्य कारक बीच:
यस ईलाका मा संकेत स्तर;
वेब को गुणस्तर;
तदनुसार, यी सूचकहरू सामान्यतया नेटवर्क मूल्यांकन गर्छ। प्रत्येक अपरेटर प्रस्ताव? के अवस्थामा र कुन दर सबैभन्दा लाभदायक रूपमा छलफल गरिनेछ?
Yota - एक अपेक्षाकृत नयाँ कम्पनी। त्यो बस रूस मा फैलाउन हुन्छ। त्यो किन यति छैन धेरै यसको बारेमा समीक्षा छ। यो एक अलग एन्टेना-संकेत एम्पलीफायर असल घर इन्टरनेट प्रदान गर्दछ।
यस गरेको अपरेटर उच्च सेवाहरू को लागत। यो यति संभावित ग्राहकहरु भन्छन्। यो नागरिक त्यहाँ बारम्बार नेटवर्क असफलता हो कि उल्लेख गरेको छ, इन्टरनेट गति खस्छ। तसर्थ, "आईओटा" ध्यान हुँदैन। जे भए पनि, क्षणमा। सिफारिस मात्र अति रोगी अपरेटर लागि प्रतीक्षा गर्न इच्छुक छन् जो ग्राहकहरु एक प्रमुख र व्यापक हुन, र एक स्थिर जडान प्राप्त हुनेछ।
निम्न विकल्पहरू बासिन्दा प्रस्ताव, को "मेघाफोन" छ। यो कम्पनी लामो यो सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक मानिन्छ, रूस मा उपस्थित भएको छ। कम्पनीहरु को मोबाइल नेटवर्क विविध ग्राहक समीक्षा हो। धेरै दर्शाउन पनि "मेघाफोन" कुनै फरक संचार गुणस्तर छ कि। , इन्टरनेट सुस्त छ अक्सर प्रियजनहरूलाई समस्याग्रस्त छ पुग्न भारी लोड अन्तर्गत विभिन्न दुर्घटनाहरु उत्पन्न: नेटवर्कमा धेरै राम्रो काम गर्दैन। तैपनि राय "मेगाफन" सबै सेवाहरू प्रतियोगिता तुलनामा सस्तो हो भन्ने तथ्यलाई पनि कुरा।
यो कम्पनी बाट मोबाइल उपकरणहरूको नेटवर्क धेरै स्थिर काम छैन, तर सबै संचार बजेट छ। इन्टरनेटमा सन्देशहरू हेर्न वा एक कल गर्न धेरै भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन। सदस्यहरू रुचाउनु पनि सक्रिय मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गर्नेहरूका लागि "मेघाफोन" सुझाव दिन्छौं।
के अक्सर प्रस्ताव र शुल्क रुचि प्रयोगकर्ता? अब एक विशाल लोकप्रिय पोको सेवाहरू। तिनीहरूमध्ये निम्न दर हो:
XS - कल र एसएमएस सन्देश को 100 मुक्त मिनेट, इन्टरनेट ट्राफिकको 1 जीबी, साथै रूस "मेघाफोन" निःशुल्क कल दिइएको;
एस - माथि परिभाषित सबै संकेतक, इन्टरनेट 4GB को सीमा छ वृद्धि, एसएमएस 300 टुक्रा र "मुक्त" 300 मिनेट कल;
एम - 1200 सन्देश र संवाद को मिनेट, इन्टरनेटमा यातायात को 15 जीबी;
एल को - सीमा 1 500 मिनेट र सन्देशहरू वृद्धि भएको छ, तर इन्टरनेट ट्राफिक भन्दा कम छ - 15 जीबी;
वीआईपी - कुरा गर्ने समय र एसएमएस को 3000 मिनेट, इन्टरनेटमा जानकारी 15 GB को लागि प्रदान गर्दछ।
सबै माथि भाडा हुँदा पनि रूस यात्रा मान्य छन्। मात्र अपवाद पहिलो वाक्य हो। घर इन्टरनेट, समीक्षा अनुसार, "मेघाफोन" राम्रो काम गर्दैन।
"Tele2" - सक्रिय विकास भएको एक कम्पनी हो। यो यति धेरै ग्राहकहरु frustrates कि सबै शहर छैन टाढा छ। तर जहाँ छ "Tele2" सदस्यहरू यस संचालक को प्रयोग सन्तुष्ट छन्।
इन्टरनेटमा लागि पूर्ण: सामाजिक सञ्जाल (वा कम्प्युटर मोबाइल संस्करण - यो त महत्त्वपूर्ण छैन) चाँडै खोलियो, डाटा निकटतम सम्भव समयमा लोड छ, तस्बिरहरू त्रुटि बिना प्रदर्शित छन्। सदस्यहरू यो "Tele2" मोबाइल उपकरणमा इन्टरनेट प्रयोगको लागि उपयुक्त छ भनेर संकेत गर्छ।
सामान्य मा, एक राम्रो जडान उपलब्ध छ। को "Tele2" को धेरै अझै अपरेटर रूस भर फैलाउन गर्छ के छैन repels। तर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक छैन। मूल्यहरु, कम्पनी छैन पनि उच्च छ। ग्राहक तपाईं कम्पनी बाट धेरै आकर्षक प्रस्ताव पाउन सक्नुहुन्छ भनेर आफ्नो समीक्षा मा नोटिस। छैन भन्दा महंगा, तर सस्तो मोबाइल नेटवर्क।
यो बिन्दुमा यो निम्न सुझावहरू ध्यान सिफारिस गरिएको छ:
"काला" - 500 एमबी इन्टरनेट, "Tele2" (सेवा सबै प्याकेटहरू मा उपस्थित) गर्न क्षेत्र भित्र निःशुल्क कल, रूस भर अपरेटर निःशुल्क कल को 200 मिनेट।
300 मिनेट, निःशुल्क एसएमएस को नै नम्बर, इन्टरनेट ट्राफिकको4जीबी - "यो धेरै कालो छ।"
"सबैभन्दा कालो" -6जीबी इन्टरनेट, कुरा गर्ने समय को 500 मिनेट, 500 सन्देशहरू।
"द अल्ट्रा" - 800 एसएमएस, 800 मिनेट, यातायात को 8 जीबी।
"असीमित काला" - रूस मा 200 पोष्ट, कोठा घर क्षेत्र र रूस, असीमित इन्टरनेट ट्राफिक मा संवाद को 200 मिनेट।
निम्न मोबाइल नेटवर्क - सेवा "बीलाईन"। यो कथन आफ्नो तरिका को सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक छ। गम्भीर आग्रह ग्राहकहरु बीचमा पाउँछन्। समीक्षा एकदम अक्सर घर इन्टरनेट लागि, साथै मोबाइल उपकरणहरू नागरिकहरु मार्फत वर्ल्ड वाइड वेब लागि यो विकल्प प्राथमिकता दिन भनेर संकेत गर्छ।
हो, "बीलाईन" कहिलेकाहीं त्यहाँ असफलता हो। लिङ्क नै मात्र अन्तर्गत भारी लोड राम्ररी कार्य छैन स्थिर छ। कल सेवामा मूल्य ट्याग संग ग्राहक dissatisfaction। रूस मा, "बीलाईन" मोबाइल जडान सबैभन्दा महंगा अपरेटर छ। सामाजिक सञ्जाल, भिडियो र फोटो progruzhat चाँडै, तर यो सबै भुक्तानी गर्न हुनेछ। यसबाहेक, यो सिद्धान्त पनि मोबाइल सेवा, र घर इन्टरनेट लागू हुन्छ।
जो सबैभन्दा चासो ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ? जो लोकप्रियता, "सबै कुरा!" रेखा पाउनु भएको छ। उनको धन्यवाद, तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
"सबै 300": 100 एसएमएस-सन्देशहरू, भाषण bysplatnyh को 400 मिनेट, यातायात को 10 जीबी।
"500 को सबै": - 600 मिनेट र सन्देशहरू, असीमित इन्टरनेट पहुँच यी तथ्याङ्कले सबै प्रिपे प्रति महिना 300 टुक्रा, 800, 18 जीबी, पश्चात गर्न क्रमशः वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ।
"को 800 को सबै": प्रिपेड वेब यातायात, संवाद को 1200 मिनेट, 500 सन्देशहरू पश्चात को 22 जीबी प्रदान गर्दछ - bizlimitnuyu नेटवर्क 1500 मिनेट र एसएमएस लागि।
अपरेटर अन्तिम आज एक मोबाइल नेटवर्क छ - "टन" हो। यो पनि एक ठूलो संगठन हो। धेरै दर्शाउन "टन" "बीलाईन" को मुख्य प्रतियोगी हुन्छ। गुणस्तर uslupaet बिट, तर तैपनि, यो अझै पनि स्थिर छ।
तर सेवाहरूको लागत प्रसन्न। इन्टरनेट को घर र, र ब्याच विकल्प र शुल्क। यो भने धेरै तत्काल वरपर मा "टन" जडान भएका छन् प्रयोग गर्न सबैभन्दा लाभप्रद छ। पनि घर इन्टरनेट लागि उपयुक्त: विफलता देखेको छैन, नेटवर्क नराम्ररी मात्र वन क्षेत्रमा वा टाढा सभ्यता स्थानबाट पक्रेको छ।
के सुझाव रुचि हुन सक्छ? निस्सन्देह, प्याकेज विकल्पहरू। यो आफ्नो सक्रिय यो नेटवर्क प्रदान गर्दछ छ। मोबाइल फोन इन्टरनेट, लगभग गएका प्रयोग गर्न अनुमति छैन। त्यसैले, सदस्यहरू तुरुन्तै चढाइन्थ्यो जो शुल्क र मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट रुचाउँछु। "टन" मांग निम्न योजना मा:
स्मार्ट: इन्टरनेट4जीबी, रूस भित्र 500 एसएमएस, देश मा कल निःशुल्क मिनेट को नै नम्बर, असीमित संचार "टन" संग।
"स्मार्ट Bezlimitische": 200 मिनेट, 200 सन्देशहरू, असीमित इन्टरनेट, रूस लागि "टन" निःशुल्क कल।
स्मार्ट + -6जीबी इन्टरनेट यातायात, 900 मिनेट र एसएमएस, देश को लागि "टन" निःशुल्क संचार।
अब म हो रूसी मोबाइल नेटवर्क संचालक के भन्दा साधारण बुझ्छु। कुन विकल्प रोज्ने? यसलाई आफ्नै प्रत्येक निर्णय छ। गर्नुपर्छ आफ्नो प्रियजनलाई र संचार निरन्तर कायम छ कोसँग ती हुन् के कम्पनी ध्यान। यसलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ नेटवर्क भित्र लगभग सबै कम्पनीहरु निःशुल्क कल छ।
तपाईं खातामा यो कारक लिन भने, यो "बीलाईन" र "Tele2" को "टन" सबै को पहिलो हेर्न उचित छ। त्यसपछि "मेगाफन" गर्न। तर Yota देश को धेरै क्षेत्रहरु मा थप पर्याप्त मांग प्रयोग गर्दैन।
को यूराल को प्राकृतिक क्षेत्रहरु: तालिका र विवरण
ठूलो पर्खाल Wingle5- स्टाइलिश एसयूवी वा workhorse?
उत्पादहरूमा क्याल्सियम: यो महत्त्वपूर्ण होइन मात्रा मात्र होइन, तर अन्य तत्वहरूसँग पनि अनुपात
केंद्रीकृत लेखा: संगठनात्मक संरचना, काम सिद्धान्त